Azafady, ady fiady sady fitady… | NewsMada
Azafady, ady fiady sady fitady…
Fitondrana ny teny sy ny hetahetam-bahoaka, fanaraha-maso ny asan’ny governemanta, fanaovan-dalàna. Ireo ny asan’ny solombavambahoaka eny amin’ny Antenimierampirenena. Izay no mampihazakaza amin’izao fifidianana izao? Eo koa ny karazan-tombontsoa… Eny, na ny tombon-jon’ny mpikamban’ny parlemanta ihany aza: tsy azo enjehina araka ny lalàna, raha tsy hoe tratra ambodiomby, ohatra.
Nefa raha ny fandrotsahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina ho solombavambahoaka amin’izao, izay hifarana ny 12 marsa: toa mangingina sy mampalaindaina ratsy ny sasany ny raharaha. Nahoana? Maro ny mety ho antony; eny, na noho paipaika sy kajikajy politika ihany aza: fifandaminana anatiny eo amin’ny antoko na vondrona politika, na fifandroritana amin’ny samy hery politika aza.
Amin’ny lafiny politika, ady fiady sady fitady ny fifidianana solombavambahoaka toy izao. Tsy hoe mahazo toerana eny amin’ny hoe lapan’ny demokrasia, Tsimbazaza, fotsiny, fa mety hatreny amin’ny lapan’ny praiminisitra, Mahazoarivo. Eny, mety hatrany amin’ny minisitera samihafa aza… Arakaraka ny fifandanjan-kery vaovao amin’io fifidianana io ny ho firafitry ny ny governemanta vaovao eo?
Azafady, ady fiady sady fitady, raha mbola hanao politika politika. Io ny tena anisan’ny miantoka sy ilalaovana ny hoe demokrasia rehefa tena voafehy ka tsy mivoaka ny varavarana na midina an-dalambe intsony. Miantoka ny fahamarinan-toerana politika izany; eny, na ny filohan’ny Repoblika tsy ho tratran’ny fampiatoana azy amin’ny asany aza, na ny praiminisitra tsy ho azon’ny fitsipaham-pitokisana…
Ady fiady sady fitady izao fifidianana solombavambahoaka izao. Tsy mahagaga raha be ny kajikajy sy ny paipaika politika. Tonga hatramin’ny fifampiandrasana: iza no aiza, iza no atao inona? Tsy mahagaga koa raha misy, ohatra, ny samy manana ny lalany, na mpiray donak’afo hatramin’izay aza. Politika io: arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa iadiana na arovana, na toy inona resaka sy fisehoana.